Homeस्वास्थ्ययौ’नाङ्गको रौं हटाउँदा के हुन्छ ? हटाउँन हुन्छ कि हुदैन, जान्नुहोस् !
यौ’न अं’गको वरिपरि आउने बाक्लो तथा मोटो किसिमको रौंलाई नै यौ’नकेश भनिन्छ। यौ’नकेश यस्तै १० देखि १५ वर्षको उमेरमा आउन थाल्छ। जातअनुसार यसको मात्रा र किसिममा फरक पर्न सक्छ। सामान्यतः तिब्बती-बर्मेलीभन्दा भारतेली-आर्य मूलका मानिसमा शरीरको अन्य भागमा बढी रौं हुनुका साथै यौ’नकेश पनि बढी र लामा हुन्छन्।
पुर्‍याउँछ। यौ’न केश आकर्षक हुने भए पनि कतिपयलाई यो मन पर्दैन। पहिरन र जीवन शैली फरक-फरक भएजस्तै व्यक्तिअनुसार शरीरमा भएको रौंलाई कसरी राख्ने वा सजावट गर्ने भन्ने कुरा फरक पर्छ।
एक स्थानमा दुई पल्टभन्दा बढी ब्ले’ड चलाउनु हुँदैन। खौरिने काम सकिएपछि साबुनपानीले यौ’नअंग धुनुपर्छ। छाला केही पो’लेजस्तो हुनबाट जोगिन पाउडरको प्रयोग उपयुक्त हुन सक्छ। एकपल्ट खौ*रिएपछि, फेरि रौं टुसाउन थाल्दा घो’च्ने’ भएकाले यौ’नस’म्पर्कमा असजिलो उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले रौं फाल्ने क्रमलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक हुनसक्छ।
साप्ताहिक डा. राजेन्द्र भद्राले दिएको यौ’न जिज्ञासाको समाधानबाट –